AntiSocial: ဖုန်းကိုစွဲလမ်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » AntiSocial: ဖုန်းကိုစွဲ
AntiSocial: ဖုန်းကိုစွဲ APK ကို
သင်အခြားလူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသင်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုအသုံးမည်မျှထွက်ရှာတွေ့မှစပ်စုဖြစ်ပါသလား AntiSocial သငျသညျ '' သာမန်အသုံးပြုမှု '' တူသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ကိုကူညီမသာ, သင်မူကား, ဖြုတ်အာရုံပြံ့လှငျ့ minimize နှင့်အရေးပါသောအရာတို့ကိုအာရုံစိုက်နိုင်အောင်, သင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ tools တွေပေးနှင့်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဖုန်းအသုံးပြုမှုကန့်သတ်ရန်ဖို့ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းရရှိနိုင်ပါသည်အခြားအက်ပ်ရှိပါတယ်နေစဉ်, AntiSocial သူတို့လိုအပ်သောအရေးယူဖို့လိုအပ်သတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူအားပေးအကြောင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရ၏။ ဒီအမရရှိနိုင်အရှင်းလင်းဆုံးနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကိုမှတဆင့်ပြုသောအမှုနှင့်သင်တစ်ဦးအသိပေး decision.What AntiSocial ထူးခြားတဲ့စေသည်စေရန်လိုအပ်ပါတယ်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုအပြည့်အဝအသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများကယ်နှုတ်တော်မူရန်သာ App ဖြစ်ပါတယ်သလဲ?
★သင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုအားလုံးအခြားအသုံးပြုသူများဆန့်ကျင်စံအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ '' ပုံမှန်အသုံးပြုမှု '' သည်အဘယ်အရာတစ်ဦးနားလည်မှုကိုရယူလိုက်ပါ
★ဖုန်းသော့ဖွင့်ဖို့နဲ့ AntiSocial အလုပ်လုပ်ဘို့ screen ပေါ်မှာဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးမလိုအပ်ပါဘူး
★အလွန့်အလွန်အသုံးပြုသူဖော်ရွေ interface ကို
★ကြော်ငြာအခမဲ့ - ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဘယ်လို ForeverSo?
installed ပြီးတာနဲ့ AntiSocial သင်ပင်ကသိရှိခြင်းမရှိဘဲသင်၏ဖုန်းရဲ့နောက်ခံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုစုဆောင်းကာနားလည်ရန်လွယ်ကူသောအစီရင်ခံစာကယ်တင်တတ်၏။
ပို. အရေးကြီးသည်, သင်ပိုပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်တခြားလူတိုင်းထက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအသုံးပြုဖို့ရှိမရှိလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အသိပညာတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏, ထိုအရပ်ကနေသင်လိုချင်သောသို့မဟုတ်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်အရေးယူဖို့လိုအပ်ရှိမရှိကိုသင်မှတက်ပါတယ်။ ဒီ app, စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းကမ်းလှမ်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု apps များနှင့်အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ရန်ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, ဒီလုံးဝအသုံးပြုသူမှတက်သည်။
AntiSocial သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအချိန်ထိန်းချုပ် ယူ. အာရုံ minimize ရန်သင့်အားအာဏာ။ ကျနော်တို့ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသူအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပို့ဆောင်၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်သည့်အခြားသူများထက်အချို့သောအဘို့အပိုကြီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်မည်အကြောင်းနားလည်သင်တို့သည်လည်းအများကြီးချွတ်လိုအပ်အချို့ကိုသင်ပေးရန်, apps များပိတ်ဆို့ခြင်း apps များကို disable နှင့်သင့်ပါသည်ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်အရေးယူနိုင်ပါတယ် သငျသညျစွဲခံစားနေမယ်ဆိုရင်အချိန်။ ကသေးနေတဲ့ကပ်ဘေးဆိုင်ရာပြဿနာမဖြစ်စေခြင်းငှါအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြုတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းများကနေ disconnect လုပ်ဖို့အဘို့နှင့်ကြောင့်ခက်ခဲဖြစ်လာနေသည်။ ကျနော်တို့အဲဒါကို, လေ့လာနေအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ကျချိန်မှကြွလာအထူးသဖြင့်အခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းများ၏အာရုံကိုရှောင်ရှားရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်နားလည်ပါတယ်။ ဂိမ်းများကိုပိတ်ဆို့နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာပိုကောင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ရရှိနှင့်သင်အရေးကြီးပါတယ်သောအရာကိုအာရုံစိုက်နိုင်အောင်အာရုံအသေးအဖွဲမှရှည်လျားသောလမ်းသွားနိုင်ပါတယ်ပိတ်ဆို့ဖို့စွမ်းရည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာစုစုပေါင်းအသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံ, စာသား, ဂီတမှစာရင်းနှင့်အများကြီးပို။ သင်ပင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ဖြစ်လို့အလေ့အထကိုချိုးဖျက်ဖို့ရှာဖွေနေသူတွေအတွက်, သူတို့ရဲ့ဖုန်းဖြင့်အာရုံသို့မဟုတ်ပဲသူတို့ကိုယ်သူတို့ချွတ်အချိန်နည်းနည်းပေးခံကိုရှောင်ရှား, AntiSocial ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့်စုံအစီရင်ခံခြင်းနှင့် In-depth ကိုအမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့်, သင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် interaction ကခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ရ။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစွဲလမ်းချိုး AntiSocial နှင့်သင်၏တစ်နေ့တာတာဝန်ခံယူပါ! ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုမှု tracker ။
သင့်ရဲ့ app ကိုအသုံးပြုမှုများ★ကြည့်ရန်နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်အစီရင်ခံ
★ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအခြားသူများနှင့်သင့်ရဲ့ app ကိုအသုံးပြုမှုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
★ထိုးမြဲလက်မှတ် In-depth ကိုအမှတ်ပေးစနစ်က
သင့်ရဲ့ app ကိုစွဲအလေ့အထကိုချိုးဖျက်ဖို့★ Discover နည်းလမ်းများ
ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကိုအသုံးပြုမှုကိုကူညီ★3optional ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း Modes သာ, သောသင်သုံးရင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု apps များ
ထိုသို့၏အချက်ရန်အရေးကြီးပါသည် AntiSocial မနိုင်: မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့် app ရဲ့ contents တွေကိုများ၏ content တွေကို Read, ဒါမှမဟုတ်သင့်တည်နေရာကိုခြေရာခံ။
2017 အတွက်ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုဖြစ်စေ app ကိုအဖြစ်စာရင်း AntiSocial - The Next Web ►
Huffington Post ► - 2017 အတွက်အမျိုးအစားပြောင်းဖို့ app ကိုအဖြစ်စာရင်း AntiSocial
►စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် - 2017 အတွက်သင်ပိုမိုထိရောက်စေရန် app ကိုအဖြစ်စာရင်း
ယနေ့ AntiSocial Download! Check နှင့်သင်ဘယ်လောက်စွဲတွေ့မြင်!
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, Antisocial.io သွားရောက်ကြည့်ရှု
7.62 ကို MB
Bugbean Pty Ltd မှ
ဒါကနိုင်သလား Apps ကပ ...
ဖုန်းအသုံးပြုမှု - အက်ပ်များ…
သင့်ရဲ့နာရီ - ဖုန်းကို ...
StayFree - ဖုန်း ...
ပိုမိုထိရောက်သောအချိန် - ...
ကာတွန်း 3D ရာသီဥတု
ရိုးရှင်းသော Calculator + Graph